Homeसमाचारदेशभर हिउँदे वर्षा सुरु ! एक सातासम्म झरी पर्ने मौसमविद्को भनाइ
January 16, 2020 Spnews समाचार Comments Off on देशभर हिउँदे वर्षा सुरु ! एक सातासम्म झरी पर्ने मौसमविद्को भनाइ
केही दिन खुलेको मौसम बिहीबारबाट फेरि बदली भएको छ। बिहीबारदेखि देशभर दिउँदे वर्षा सुरु भएको छ। तीन दिनसम्म सफा मौसम हुँदा सामान्य रहेको जनजीवन वर्षाका कारण फेरि प्रभावित बनेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, मुलुकको पूर्वी मध्य तथा पश्चिमी अधिकांश भू–भागमा हल्का र मध्यम वर्षा भएको छ।
पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले एक सातासम्म झरी पर्ने मौसमविद्को भनाइ छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मिनकुमार अर्यालले भने, ‘हिउँदे वर्षा पुनः सुरु भएको छ। मौसम देशव्यापी रुपमा फेरिएको छ।’
हिमाली एवम् उच्चपहाडी भूभागमा हिमपात भएको छ। तराईका भू भागमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। बिहीबारदेखि बढेको चिसो एक सातासम्म रहने मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। तराईमा हुस्सु र कुहिरो लाग्नेछ। न्युनतम तापक्रममा भने उल्लेखनीय परिवर्तन हुनेछैन।
शुक्रबार र शनिबारदेखि अधिकतम तापक्रम घट्ने विभागले जनाएको छ। साताको अन्त्यतिर मुलुकभर मौसम सफा रहने मौसम पूर्वानुमान शाखाको अनुमान छ। साताको अन्त्यतिर बुधबार र विहिबार मौसम प्रणालीमा सुधार आउने छ। मौसम सामान्यतया सफा रहने छ।
सन्तोष दाई जस्तो श्रीमान पाउन भाग्यमा हुनुपर्छ ! प्रमिलालाई भेटे भने कपालमा समाएर झा*पड हान्थे भन्दै हिमा आ’क्रोशित (हेर्नुस् भिडियो)
धादिङको बेनीघाट झोलुङ्गे पुलबाट एक दम्पतीले दुई नाबालक छोरासहित त्रिशूली नदीमा हामफाले !